Vaovao Samihafa Archives - Page 2 sur 4 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
27 juillet 2014 adminVaovao Samihafa
Faha 15 taonan’ny chorale FEFIA Ambohimalaza
Feno 15 taona ny chorale FEFIA Ambohimalaza; hanamarika izany izy ireo ny sabata 26 jolay 2014 ho avy izao. Hisy lanonam-pifaliana hotanterahina eny amin’ny Fiangonana Apokalypsy Ambohimalaza ny androtr’io izay hanasana ireo vahiny maro samihafaLire la suite…
20 janvier 2014 adminVaovao Samihafa
Ambohimarina : Sabata 18 janoary 2014
Fifaliana hatrany no iarahana amin’ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara isaky ny Sabata. Ny Sabata 18 Janoary 2014 lasa teo dia nitsidika sy nitondra ny tenin’Andriamanitra ho an’ireo mpino maro be teo amin’ny Fiangonana Apokalypsy AndramanjaLire la suite…
19 août 2013 adminVaovao Samihafa
Consecration de l’Église d’ Ankeniheny
Comme ce jour était la consecration de l’ église Apocalypse d’Ankeniheny, pasteur Mailhol et ses délégations sont venu nombreux pour honorer Dieu pour ce grand jour; avant le partage du message de Dieu, le pasteurLire la suite…
16 août 2012 adminVaovao Samihafa
MIDER’Azy vita BAC 2012
Tahaka ny isantaona dia ho fiderana an’Andriamanitra amin’ny fahavitan’ny fanadinana CEPE, BEPC, BAC dia hisy ny hetsika MIDER’Azy vita BAC andiany faha 3, karakarain’ny A.J.A EVENT (Association des Jeunes Apocalypses). Ireto avy ny andinindin’izany : Toerana :Lire la suite…
30 juillet 2012 adminVaovao Samihafa
Mbola mitohy hatrany ny famaranana Apokalypsy ataon’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol sy ireo delegasiona miaraka aminy, any amin’ny faritra avaratr’i Madagasikara. Ny sabata 28 jolay 2012 lasa teo dia tao Ambanja no nanatontosana izany kaLire la suite…